Magacyada Eyga Yar Yar ee 500-ta ah: Fikradaha wanaagsan, Cute & Tiny - Magacyada Eyga
Magacyada Eyga Yar Yar ee 500-ta ah: Fikradaha wanaagsan, Cute & Tiny
Ma haysataa eey yar yar oo u baahan mid ka mid ah Magacyada Eyga Yar ee ugu fiican ee u dhigma shakhsiyaddooda weyn?
Noocyada yaryar waxay u muuqdaan inay leeyihiin tamar faro badan, adkeysi iyo gaajo, halka ay sidoo kale awood u leeyihiin inay si fiican ugu habboonaan karaan boorsadaada - sidaas darteed waxaad helaysaa sida ugu fiican labada adduun.
Noocyo kala duwan oo eeyaha yaryar ah waxay u muuqdaan inay bixiyaan noocyo kala duwan oo dabeecado iyo astaamo kala duwan ah; si kastaba ha noqotee, dhammaantood waa kuwo la jecel yahay, nool oo had iyo jeer kor u kacaya.
Halkan waxaa ku yaal liistada magacyada eyda yaryar ee ugu fiican halkaas, oo ay ku jiraan lab, dheddig, mid gaar ah, qosol iyo fikrado mug leh oo mug leh ...
Magacyada Ey Yar Yar
Magacyo Cute Ah Ey Yar
Magacyo Ey Yar Yar oo Gaarka ah
Magacyo Ey Yar Yar Oo Qosol Badan
Magacyada Ey Yar
Doorashada Magaca Eyga Yar
In kasta oo aad u maleyn karto in eeyaha waaweyn ay yihiin 'eeyaha shaqeynaya' oo keliya ee halkaas jooga, qaar ka mid ah noocyada yaryar ayaa sidoo kale yeeshay qaybtooda cadaalad ah ee shaqada taariikhda oo dhan :
Dachshunds waxaa loo adeegsaday ugaarsiga iyo qodidda bajaajleyda Jarmalka
West Highland Terriers waxay ugaarsan jireen dawacooyinka Scotland
Bichon Frize waxaa loo tababaray inuu tabo ku sameeyo goob wareeg ah
Waligaa daqiiqad caajis ah ma yeelan doontid haddii aad leedahay eey yar, waadna la yaabi doontaa inta tamar ah ee lagu rakibayo qaabkaas yar.
Liiskan waxaa ku jira magacyada eyda yaryar ee ugu fiican halkaas, ee aan bilowno ...
Rascal - fikradda saxda ah ee qashin yar oo aan waligiis u muuqan inuu raacayo xeerarka! Rascal waa magac aad u qurux badan oo eey yar oo jilicsan, xun, oo guud ahaan fowdo ah waqtiyada ugu fiican!
Muddo dheer ayaa laga doodayay in jaranjarada yar yar ay ka jar jaban yihiin kuwa waaweyn, iyo in eeyaha waawayn ay ka jecel yihiin kuwa yaryar.
In kasta oo aan aaminsanahay in eeyaha oo dhami ay ka wada siman yihiin wax la jeclaan karo, kalgacal leh oo la jeclaan karo midba midka kale, haddii aad rabto in eeygaaga yar uu fursad dagaal ku yeesho dooddan duugga ah, waxaad u baahan tahay inaad siiso iyaga magaca ugu yar eeyaha yaryar ee suuragalka ah!
Mid kasta oo ka mid ah fikradaha ku jira liistada hoos ku xusan waxay noqon doontaa wax aan macquul ahayn in la iska caabiyo, maadaama ay adag tahay in la arko Pomeranian yar oo loo yaqaan 'Bambi' oo aan u dhintaan culeys saa'id ah .
In kasta oo lacag-bixiyayaashan oo dhami ay ku fiicnaan lahaayeen noocyo waaweyn, waxay si gaar ah ugu habboon yihiin eeyo yaryar oo yar yar.
Marshmallow - ku habboon wax yar, eey cad oo qalafsan taas oo u eg marshmallow!
Waxaa jira in ka badan 50 nooc oo yaryar oo ay aqoonsan yihiin naadiyada aqalku, iyo kumanaan eeyo yaryar ah oo ay leeyihiin nooc kasta.
Isku dayga inaad soo qaadato magac aan caadi ahayn oo xiiso leh ayaa noqon kara wax aad u adag sababtoo ah tirada tirada eeyaha yar yar ee meesha yaal.
Ha ka welwelin, waxaan kugu soo koobnay liiskan fikradaha gaarka ah; Laga soo bilaabo Japan ilaa Scotland, waxaan leenahay monikers oo ka kala yimid dhaqamo kala duwan oo aad u tiro badan, oo xitaa ka sii wanaagsan, magacyadan oo dhan macnaheedu waa 'yar' ama 'yar'!
Waxaan leenahay 'ubaxyo yaryar' iyo 'qurux yar', iyo sidoo kale 'yar laakiin kulul' iyo 'dagaalyahan yar' ... hab fiican inaad u magacawdo eeygaaga
= waa in la siiyo moniker u dhigma shakhsiyaddooda.
Kohana - gabadh qurux badan oo magaceedu yahay Jabaan oo macnaheedu yahay ‘ubax yar’; ku habboon eey yar oo qurux badan, jilicsan oo qurux badan sida 'ubax yar'
Dood ahaan, eeyaha yaryar waxay noqon karaan qaar ka mid ah cunnooyinka ugu qosolka badan ee aan waligeen soo aragnay, waxay leeyihiin tamar iyo ruuxi aad u tiro badan oo isku duuban.
Chihuahuas waa nooc caan ah oo qosol badan, kama baqaan inay eeyaha ku ciyi karaan toban jeer ka badan cabbirkooda, mararka qaarkoodna waad khaldami kartaa xanaaqooda iyo geesinimadooda sida libaaxa oo kale!
Hase yeeshe, eeyahaas naxariis darrada ah waxay culeyskoodu yihiin qiyaastii 2kg, waana yar yihiin oo ay ku qaadan karaan boorsada.
Ey leh shakhsiyad sidan u qosol badan ayaa u qalma magac qosol leh si uu u muujiyo halyeeyadooda maadda ah ee majaajillada ah, waxaadna halkan ka heli doontaa liis ay ku qoran yihiin fikrado qosol badan ...
Jabba - oo uu dhiirrigeliyey dabeecadda Star Wars, Jabba the Hut, oo malaha boqol jeer ka weyn cabbirka eey yar sidaa darteed ayaa magac yar oo maad iyo qosol leh u leh eey yar!
Haddii eeygaaga yar ee lab ah uu qaato qaabkooda, ama uu aamminsan yahay inuu shan jeer ka sii weyn yahay, waxaan leenahay magac ku habboon iyaga oo dhulka la jooga.
Macno malahan haddii eeygaagu doorbido cinwaan yar, laakiin lab ah, ama haddii ay rabaan cinwaan iyaga ka soocaya sida eyga ugu quruxda badan ee baarkinka eeyga, waxaan leenahay kaligey kasta oo eey u baahan tahay weligeed!
Qaar badan oo ka mid ah magacyada eyda yaryar ayaa laga soo qaatay dadka caanka ah iyo kuwa ku jira dhaqanka pop, markaa wax macno ah ma leh haddii cunuggaaga uu ka sii badan yahay Thor Odinson marka loo eego Ozzy Osbourne ama Freddie Mercury, waxaa jira fikrad ku habboon liiskan oo ah afarta lugood ee dhogorta leh ee aad la kulanto.
Bruno - moniker aad u fudud, oo ku habboonaan lahaa eey kasta oo halkaas jooga. Magaca Bruno waxaa laga soo qaatay ereyga 'bunni' oo Jarmal ah.
Magacyada Eyda Yar Yar
Reece Cesraa Chester
Archie Kaysar Matthias
Casper Ugaadhsade Farshaxan
Sammy Ugu badnaan Benji
Waxba ma ahan in eeyahaaga yar ee yar yar ay isku aqoonsadaan amiirad Disney ah ama dagaalyahan dumar ah oo adag, waxaan u haynaa cinwaan ku habboon iyaga.
Liiskan waxaa ku jira fikrado dhowr ah oo ku habboon qurux iyo nimco, laakiin sidoo kale la koolkoolin oo la kharribo, eey yar oo dumar ah, sida Belle, Anna, Elsa, Ariel iyo Jasmine.
Si kastaba ha noqotee, haddii eeygaaga dheddigga ahi uu muujiyo oraahda Shakespeare 'in kastoo ay yar tahay, way xanaaq badan tahay', markaa waxaan sidoo kale haynaa magacyo dhowr ah oo ay dhiirrigeliyeen halyeeyo dumar ah oo xoog leh, geesi ah oo aan cabsi lahayn, sida Lara Croft, Hermione Granger iyo Katniss Everdeen .
Qurux badan - fikrad kale oo fudud, ereygan macnihiisu waa ‘qurux’ af Talyaani, sidaa darteed wax weyn ayey u noqon doontaa arday dheddig ah oo madaxa ka dhigaya markay rogrogto beerta eyga!
Magacyada Eeyaha Dheddigga Yar
Qumbaha Malag Sanjabiil
Mass waabari Lilly
Jade Ilkaha Cleo
Dora Katniss Qurux badan
Chloe Maalmaha Hazel
Dayax Rosie Elsa
Amiirad Diana Jasmin
Si kasta oo yar eeyahaagu u yar yahay, doorashada cinwaanka saxda ah ee iyaga u gaar ah had iyo jeer waxay noqon doontaa go'aan weyn, badanaaba waxay noqon kartaa wax cabsi leh mararka qaarkood.
Si kastaba ha noqotee, waxaan haynaa talooyin dhowr ah oo kaa caawin kara inaad u doorato magaca ugu fiican eey kasta oo yar:
1. Cute, funny, fudud ama dhaqanka?
Waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan oo aad ugu gudbi karto magacaabista eeygaaga xayawaanka ah, tanina waxay saameyn ku yeelan doontaa sida adiga iyo qof kasta oo kaleba u arko.
2. Cinwaanka aad dooratay waa inuu jiraa cimri dhan
Celceliska cimriga nooc yar waa 15 sano, taasi waa sannado badan oo aad u baahan tahay inaad kula noolaato magaca aad dooratay.
3. Eygaaga yar magaca u dhigma shakhsiyaddooda
Tani waa talooyinka aan jecel nahay, maxaa yeelay marwalba way shaqeysaa!
In kasta oo looxyadooda yaryar ay yihiin, eeyaha yaryar ayaa sida caadiga ah sameeya aragti aad u weyn, waxayna had iyo jeer kaaga tagi karaan iyagoo dhoola cadeynaya wejigaaga!
Hadday u xun yihiin sida libaaxa oo kale, ama ay u xishood badan yihiin sida jiirka, haddana weli waynu wada jeclaan doonnaa dhammaantood.
Waxaan rajeyneynaa inaad ka heshay liiskaan magacyada eyda yar yar!
Laga soo bilaabo amiiradaha Disney illaa tirooyinka quraafaadka Giriigga, ma jiraan wax dhiirrigelin ah oo ku saabsan fikradaha.
Haddii aad jeceshahay liiskan, ka dibna hubi inaad noogu soo sheegto faallooyinka.
Sidoo kale, haddii aad leedahay eey yar oo aad adigu iska leedahay, waxaan jeclaan lahayn inaan ogaanno magacyadooda!
Cavapoo: Eygaaga Dhammaan-agagaarkaaga
Schnoodle: Waxa Lagu Ogaado iyo Waxa Ku Fiican Iyaga
poodle oo lagu ciyaaro maltise
waa maxay morkiyada lagu daray
taranka husky oo sii yaraada
poodle cas cas oo buuxa oo koray
bichon iyo poodle isku dhafka ah